Abaqondisi bamafilimu baseSpain, obani abadume kakhulu? | Nginike isikhathi sokuphumula
UGabriela moran | | General
ICinema ingenye yobuciko obuhlonishwa kakhulu emhlabeni, obungeke bube khona ngaphandle kwesakhiwo esithokozisayo. Noma kunjalo, Yize sinendaba eyingqayizivele enamandla amakhulu, akukho lutho oluningi oluzokwenzeka ngaphandle komsebenzi obalulekile womqondisi. Umsebenzi womqondisi wefilimu ukuqondisa ukuqoshwa kukwenze kube yi-blockbuster. I-cinema yaseSpain inethalente eliningi futhi namhlanje ngizokutshela okuncane ngomlando we Abaqondisi bamafilimu abakhulu baseSpain esinayo namuhla.
Omunye wemisebenzi esemqoka yomqondisi ukwenza okuncane kwakho konke! Ngokuyinhloko unesibopho sokwenza kahle nokuphrojusa indaba ngendlela efanele izethameli. Ngumuntu owenza izinqumo ezinkulu, ngokwesibonelo: ukwenza iskripthi, ukukhetha izingoma, ukunikeza abalingisi iziyalezo, ukubheka ukuqhuma kwesigcawu ngasinye nama-engeli wamakhamera ngesikhathi sokudubula. Kepha ikakhulukazi unikela ngombono wakhe ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi indaba ikhulunywe ngezinto ezibalulekile njengokunquma isitayela semvelo. Ngezansi ngethula abathathu babaqondisi bamabhayisikobho abaziwa kakhulu baseSpain ukuze singalahlekelwa yinoma yimaphi amafilimu abo.
4 Kuthiwani ngabanye abaqondisi bamafilimu baseSpain?
Kubhekwa njenge- omunye wabaqondisi abanethonya elikhulu ngaphandle kwezwe lakubo emashumini eminyaka edlule. Wazalelwa eCalzada de Calatrava ngo-1949 emndenini wama-muleteers. Wayehlala ezungezwe ngabesifazane ababemzungezile, abangumthombo omkhulu wokugqugquzela imisebenzi yakhe. Lapho eneminyaka eyishumi nesishiyagalombili wathuthela edolobheni laseMadrid ukuyofunda i-cinema; kodwa-ke isikole besisanda kuvalwa. Lo mcimbi awubanga yisithiyo ku-Almodovar ukuze aqale ukwenza indlela yakhe. Wangena emaqenjini waseshashalazini futhi waqala ukubhala amanoveli akhe. Kuze kwaba ngo-1984 lapho eqala ukuzenza aziwe ngefilimu Yini engiyenzile engikufanele lokhu?
Isitayela sakhe sonakalisa imikhuba yobunxiwankulu baseSpain njengoba emele amaqiniso emisebenzini yakhe kwesinye isikhathi okunzima ukuwafanisa nezimo zokungalingani emphakathini. Ikhuluma ngezihloko ezinempikiswano enkulu okufana nalokhu: izidakamizwa, izingane ezizalwe zingakhethi, ubungqingili, ukuthengisa ngomzimba nokuhlukumeza. Nokho akakaze angayinaki eyakhe amahlaya omnyama nangenhlonipho. Ubhekise abalingisi uCarmen Maura noPenelope Cruz njengomunye wabalingisi abathandayo nabaculayo.
Phakathi kwemisebenzi yakhe eyinhloko sithola:
Konke ngomama wami
Isikhumba Engihlala Kuso
Imbali yemfihlo yami
Ube ngumnqobi wama-Oscars amabili: ngo-1999 sibonga u- "All about my mom" nango-2002 ngombhalo othi "Khuluma naye". Ngokwengeziwe, uklonyeliswe ngeGolden Globes, ama-BAFTA Awards, amaGoya Awards nakumaCannes Festival. Kubalulekile ukugcizelela ukuthi ngaphezu kokuba ngomunye wabaqondisi bamafilimu abaseSpain abahamba phambili; Uphinde abe ngumdidiyeli ophumelelayo nombhali wesikrini.
Ngomama odabuka eSpain nobaba waseChilean, sithola ubuzwe obubili kulo mqondisi abugcinayo njengamanje. Wazalwa ngoMashi 31, 1972 eSantiago de Chile kwathi ngonyaka olandelayo umndeni wanquma ukuthuthela eMadrid. Ubuciko bakhe baqala ukukhula kusukela ebuncaneni obukhulu lapho ekhombisa okukhulu ukuthanda ukubhala nokufunda, kanye nokuqamba izingqikithi zomculo. Ubhekwa njengomunye wabaqondisi abaphumelele kakhulu, ababhali besikrini nabaqambi besikhathi sethu sobuciko besikhombisa.
I-Los Imisebenzi yokuqala ka-Amenábar yakha amafilimu amane amafushane ekhishwe phakathi kuka-1991 no-1995. Uqale ukuthola udumo ngo-1996 ngokukhiqizwa kwe- "Thesis", okuthokozisayo okudonse amehlo abalulekile kwiBerlin Film Festival futhi wawina ama-Goya Awards ayisikhombisa. Ngo-1997 wasungula i- "Abre los ojos", ifilimu eliqanjiwe lesayensi elashanela imikhosi yaseTokyo neBerlin. Leli tulo lashiya umlingisi waseMelika uTom Cruise ehlabeke umxhwele waze wanquma ukuthola amalungelo okwenza ukuzivumelanisa okwakhishwa ngo-2001 ngaphansi kwesihloko esithi "Vanilla Sky."
Umdlalo wesithathu womqondisi onomsindo omkhulu yifilimu edumile ethi "The Others" edlala indawo kaNicole Kidman. futhi eyakhishwa ezindaweni zemidlalo yaseshashalazini ngo-2001. Yathola izilinganiso eziphezulu nokubuyekezwa okuhle kakhulu; ibibekwe futhi njenge-movie ebukwa kakhulu yonyaka eSpain.
Enye yamafilimu akhe asanda kwenziwa lapho asebenzisana khona njengomqondisi kwakungu-2015, esihloko sithi "Regression", eyayilingisa u-Emma Watson no-Ethan Hawke.
Ezinye izihloko anikele kuzo njengomqondisi, umkhiqizi, umbhali wezingoma, noma umlingisi zimi kanje:
Akekho owazi muntu
I-Amenábar inomklomelo we-Oscar emlandweni wayo, ngaphezu kwenani elikhulu lemiklomelo yeGoya.
Wazalwa ngo-1945 edolobheni laseBarcelona, ​​unomfowethu oyiwele futhi uvela emndenini ophansi. MinaUqale umsebenzi wakhe wobuchwepheshe eneminyaka engama-20 enza izikhangiso namavidyo kliphu amanye amaqembu omculo. IBayona ibona uGuillermo del Toro njengomeluleki wakhe futhi ahlangana naye ngesikhathi seSitges Film Festival ka-1993.
Ngo 2004, umbhali wesikripthi sefilimu ethi «The Orphanage» unikeze iskripthi kuBayonne. Ngokubona isidingo sokuphinda kabili isabelomali nobude befilimu, ucela usizo lukaGuillermo del Toro onikela ngokuhlanganyela ekukhiqizeni ifilimu ekhishwa eminyakeni emithathu kamuva emcimbini weCannes. Ukujabula okuvela ezilalelini kuthathe cishe imizuzu eyishumi!
Eminye yemisebenzi yomqondisi efanelekile ihambelana nomdlalo othi "The Impossible» edlala uNaomi Watts futhi yakhululwa ngo-2012. Leli tulo likhuluma ngendaba yomndeni kanye nenhlekelele eyaphila ngesikhathi se-tsunami yase-Indian Ocean. Le filimu ikwazile ukuzibonakalisa njengowokuqala okhonjiswe kakhulu eSpain kuze kube manje, ithola izigidi ezingama-2004 zamaRandi ngempelasonto yokuqala.
Ngokwengeziwe, ngo-2016 ifilimu ethi "A monster is coming to see me" yaqala ukukhonjiswa eSpain. Ukumangala okukhulu kuza lapho umqondisi owaziwayo USteven Spielberg ukhetha iBayona ukuthi iqondise isitolimende sokugcina seJurassic World ngo-2018: "The Fallen Kingdom."
Kuthiwani ngabanye abaqondisi bamafilimu baseSpain?
Ngaphandle kokungabaza, kunabaculi abaningi abakhulayo. Sithole abaqondisi abanjengo U-Icíar Bollaín, uDaniel Monzón, uFernando Trueba, uDaniel Sanchez Arévalo, uMario Camus no-Alberto Rodríguez okungafanele silahle umkhondo ngaye. Umsebenzi wakhe uqala ukuthola igama ngaphakathi embonini ngeziphakamiso zakhe.
Abaqondisi bamafilimu bathembele kwisabelomali, ngaphezu kweminye imikhawulo engxenyeni yabadali bezindaba. Yize kunjalo umsebenzi wakhe uwumgogodla wanoma yimuphi umsebenzi we-cinematographic. Kuwubuciko beqiniso ukutolika ngokufanele futhi nokuvumelanisa imibono yabanye abantu ukuyidlulisela kuzethameli ezinkulu futhi ibenze baphumelele!
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Abaqondisi bamafilimu baseSpain
Uchungechunge oluhle kakhulu lwezothando